Sisampaty Mizara Ny Tantaran’izy ireo Momba ny Loza Sedraina Rehefa Mamaky ny Taniefitr’i Sahara Handeha Hifindra Monina · Global Voices teny Malagasy
Sisampaty Mizara Ny Tantaran'izy ireo Momba ny Loza Sedraina Rehefa Mamaky ny Taniefitr'i Sahara Handeha Hifindra Monina
Voadika ny 12 Avrily 2017 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Ελληνικά, Swahili, عربي, русский, українська, English
Mpifindramonina navotana avy eny ambony zahatra abontsina rivotra. Sary natao ho an'ny sehatry ny daholobe avy amin'ny US Navy.
Fanentanana ety anaty media sosialy ny Aware Migrants , izay mikendry ny hampahafantatra ireo mpifindramonina avy aminà firenena 15 Afrikàna momba ireo loza sedraina rehefa mamakivaky ny taniefitr'i Sahara, Libia ary ny Ranomasimbe Mediterane.
Nandritry ny taona maro, an'aliny ireo mpifindramonina sy mpitsoaponenana avy ao Afrika sy Afovoany Atsinanana no niezaka ny hamakivaky ny Mediterane ho any Eoropa mba handositra ny fanenjehana politika sy ny fahantràna.
Ny International Organization for Migration (IOM), no mitantana ilay Tetikasa miaraka amin'ny tohana ara-teknika sy ny fahaizamanaon'ny masoivohom-pifandraisana Horace, ary famatsiambolan'ny Ministeran'ny Atitany Italiana, Departemantan'ny Fahalalahana Sivily sy ny Fifindramonina.
Tamin'ny 10 Martsa 2017 teo , notaterin'ny IOM fa mpifindramonina 19.567 no tonga avy eny an-dranomasina nankao Italia, saingy maty tany an-dranomasina ny 521, izay 50 mahery raha ampitahaina amin'ny vanimpotoana tahaka izao tamin'ny 2016. Avy any Cote d'Ivoare, Nizeria, Ginea, Senegaly ary Gambia no ankamaroany.
Nilaza tamin'ny IOM ny sasany tamin'ireo mpifindramonina fa zavadoza lavitra mihoatra noho izay noeritreretiny ny dian'izy ireo:
Be no tsy nanampo ny loza sy ny mety hitranga amin'ny fifindràna monina miaraka amin'ireo mpanondrana olona an-tsokosoko, tsy noho ny ranomasina irery ihany na ny teniefitra, fa koa any amin'ireo firenena lalovana toa an'i Libia. Ny fahatsiarovana ireo loza maro nananontanona ny aina nandritra ny dian'izy ireo dia mazàna no tena henjana ary tamin'ny tranga maro, ny ankamaroan'ireo mpifindramonina dia naniry ny hanadino sy hiroso hatrany, manao sorona ny ainy sy misafidy ny tsy hizara izay zavatra nanjo azy amin'ireo namany izay mbola tavela any an-tanindrazana.
Ampiasain'ilay fanentanana ny Facebook, YouTube, Instagram sy Twitter mba hanomezana sehatra media sosialy ho an'ireo mpifindramonina hifanakalozan-dry zareo ny fomba fijeriny sy ireo fijoroana vavolombelona tamin'ny alàlan'ny saripika sy lahatsary voaangona nandritra ny dia.
Efa nahatontosa lahatsary 31 misy fijoroana vavolombelona ilay fanentanana. Eto ambany ny tantaran'i Trika izay niainga avy any Sedha hatrany Tripoli:
Paco nizara ny sedra herintaona nihibohany am-ponja:
Lamin namoy ireo havan-tiany nandritry ny dia avy any Libia :
Ebrima notenenina hiverina eny an-dranomasina fa raha tsy izany dia hovonoina tao Libia sy Tonizia:
Blessing nilaza fa voaolana sy voadaroka isanandro :
Imasuen nahita ny sasantsasany tamin'ireo lehilahy matin'ny hanoanana tany an-taniefitra: